विप्लवका छोराको पुरानो फोटो कसले गर्दै छ भाइरल ?
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र सरकारबीच दुरी बढ्दै गइरहेको छ ।
सरकारले नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएपछि हालसम्म ५ जना विप्लव कार्यकर्ताको मृत्यु भइसकेको छ । भोजपुरमा युवा नेता तिर्थ घिमिरे केहि दिन अघि प्रहरीको गोली लागि मारिए । प्रहरीले भने दोहोरो भीडन्त भनेको छ ।
आफ्ना कार्यकर्ताको हत्या गरिएपछि नेकपाका महासचिव विप्लवले हत्या विरुद्ध नेपाल बन्दको कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । आफ्ना कार्यकर्ताको हत्या भएपछि विप्लवले यहि जेठ १३ गते नेपाल बन्दको घोषणा गरेका थिए ।
बन्दको पूर्वसन्ध्यामा राजधानीमा भएको अकल्पनीय घटनाले नेकपा कार्यकर्तालाई निराश बनाएको छ । किनकी उर्जाशिल एवं उदयमान युवाहरुको मृत्यु भएको छ । विस्फोटमा मृत्यु हुनेमा ४ वटै विप्लवका कार्यकर्ता रहेको प्रहरीले पुस्टि गरेको छ ।
सुकेधाराको घटनामा कालिकोटका २८ वर्षका विभु राम विक भन्ने दिपेन बिक, करिब ४०-४५ वर्षका निरन्तर मल्ल र दाङको बबई नगरपालिकाका ३२-३३ वर्षका गोकुल रानामगरको निधन भएको प्रहरीले जनाएको छ । यस्तै अनामनगरमा भएको घटनामा विप्लव निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य २७ बर्षिय प्रज्ज्वल शाही छन् ।
१० देखि १५ मिनेटको अन्तरालमा एकै पटक दुई ठाँउमा कसरी भयो ?
प्रहरीले उनीहरुले बम बनाउँदा बनाउँदै मृत्यु भएको बताएपनि विप्लव नेकपाले आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन् ।
'विप्लवले चन्दा उठाएर छोरालाई बाइक किने' भनेर धेरैले प्रचार गरेका थिए । तर, उनले त्यो फोटो मात्र खिचेका थिए । पछिल्लो समय आफ्ना विरुद्ध प्रचार युद्ध धेरै नै भएको भन्दै एक नेताले भने, 'प्रकाश हाम्रो पार्टीका एक इमान्दार कार्यकर्ता हुन् । उनी स्वास्थ्य संगठनका महासचिव छन् । उनी पार्टीका पुर्णकालिन कार्यकर्ता हुन ।
के त्यसो भए प्लेन चड्नेहरुले सेल्फी लिएर फोटो अपलोड गर्छन, प्लेन उनिहरुको आफ्नै निजि हो त ?
उनले यो बाइक कुदाएको कसैले देखेको छ त ??'